नक्कली पल शाह परे पक्राउ .... – An Online Entertainment News Portal
HomeGalleryCelebrityनक्कली पल शाह परे पक्राउ ….
पछील्लो समय निकै नै चर्चा मा रहेका पल शाहको फेक अकाउन्ट बनाउने युबक पक्राउ परेका छन । अनगिन्ती म्युजिक भिडियो मा अभिनय गरिसकेका र अहिले चलचित्रमा पनि राम्रै जमेका कलाकार पल शाह धेरै दर्शर को मन मा बस्न सफल कलाकार मध्य एक हुन ।
उनको नक्कली आइडी बनाएर विभिन्न सर्वसाधारणलाई ठग्ने विराटनगरका आमोदलाई पक्राउ गरिएको हो।उक्त ब्याक्तिले पलको म्यानेजर भनेर भिभिन्न ब्यक्तिहरुलाई ठग्दै आएको जानकारी छ । बाढी पीडितका लागि सहयोग माग्दै आएका उनलाई रुकुमकि शर्मिला कठायताले सहयोग गरेकी थिइन्। उनले सहयोग गरेको मान्छे पल नभएको शंका लागेपछि उनले न्युज २४ को कार्यक्रम सिधा कुरा जनता संग मा सहयोगका लागि पुगेकी थिइन्।
रवि लामिछानेको उक्त कार्यक्रममा आफ्नो कुरा राखेपछि पल शाहलाई लिएर रवि केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सि.आई.बि.)मा पुगेका थिए। विराटनगरको प्रहरीसंगको सहकार्यमा (सि.आई.बि.)ले आमोदलाई पक्राउ गरेको थियो। आमोदले पलको नाममा शर्मिला संग ३१ हजार ठगेका थिए।
शर्मिलाले आई एमी मार्फत उक्त पैसा पलको फेक अकाउन्ट चलाऊनेलाई पठाएकी थियिन ।